Ny bibikely miafina ao Safari dia mbola misy ao amin'ny OS X 10.10 | Avy amin'ny mac aho
Tena manaitra ahy ny Apple fa amin'izao fotoana izao dia namela bug momba ny tsiambaratelo i Apple ary noho izany ny fiarovana efa nisintona nandritra ny fotoana ela ny OS X, ity lesoka ity dia kilema fanta-daza amin'ny fampiharana Safari mikasika ny fizahana manokana izay hamonjen'ilay mpitety toerana ny adiresy isaky ny tranokala fitsidihan'ny mpampiasa fisie fa eo an-toeranaNa dia nanidy ny varavarankely sy ny fivoahana Safari aza dia mbola hita ao amin'ireo kinova farany an'ny OS X Yosemite.
Ny lesoka dia averina apetraka ao anatin'ny mekanisma fampiasana cache izay manao izany Safari ho an'ny sary masina tianao (favicons), izay tsy mihoatra na latsaka noho ireo sary kely miseho eo akaikin'ny adiresy tranonkala ao amin'ny bara adiresy URL sy ny bara ankafizinao. Ny favicon sy ny adiresy tranokala dia miara-mandeha amin'ny tranokala tsirairay notsidihina (na dia nosokafana tamin'ny varavarankely fitetezana tsy miankina) dia voatahiry ao anaty tahiry SQLite ao anatin'ny fampirimana an-tranon'ny mpampiasa ihany koa izy ireo.
Ity tahiry ity, hita ao amin'ny ~ / Library / Safari / WebpageIcons.db, ity takelaka ity dia tsy takatra akory fa tsy voahidy mba hisorohana ny halatra fampahalalana mety hitranga. Ny zavatra matotra indrindra dia tsy ny rakitra apetraka ao anaty kaonty fa kosa tsy fahombiazana efa fantatra an-taonany maro tamin'ny tatitra fanadihadiana momba ny solosaina nataon'ny gazety EURASIP (The European Association for Signal Processing) izay nanamafy fa ny endrika mora jerena amin'ny tantaran'ny fitetezana na dia "voafafa" avy amin'ny mpampiasa aza dia ny hiditra amin'ity database "WebpageIcons" ity. Ny mpanoratra ny tatitra dia nanambara:
Ity data ity dia manome firaketana tsara ny URL tsirairay notsidihina miaraka amin'ny fampahalalana hafa mifandraika amin'ny fitetezana.
Na dia amin'ny beta farany an'ny OS X Yosemite 10.10.3 manamboatra 14D98g, izay navoaka tamin'ny fiandohan'ny herinandro niaraka tamin'ny mpanamboatra manamafy fa mijanona tsy voalamina ny olana. Na dia tonga amin'ny teboka famerenana amin'ny laoniny tanteraka aza ny tranokala, dia mbola manan-kery ao amin'ny WebpageIcons.db ny data.
Manantena isika fa i Apple dia mamerina izao tsy fahombiazana izao indray mandeha izao, izay miankina amin'ny tontolon'ny asa misy azy olana manokana momba ny tsiambaratelo ho an'ny mpampiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Bibikely taloha ao amin'ny fizahan-tany manokana an'ny Safari dia mbola manan-kery ao amin'ny OS X Yosemite
Ary indray, tamin'ny taona fahenina nisesy, Apple dia nanome satro-boninahitra tsara indrindra tamin'ny Laptop Magazine